$2 800 chikwereti chemendenenzi | Kwayedza
$2 800 chikwereti chemendenenzi
12 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-11T08:23:57+00:00 2018-10-12T00:00:17+00:00 0 Views
MURUME wekuNorton akamiswa mudare reChitungwiza Magistrate’s Courts neaimbova mudzimai wake achipomerwa mhosva yekusabhadhara mari yemendenenzi izvo zvaita kuti chikwereti chake chisvike $2 880.
Givemore Muchenje (30) akamhan’arirwa kudare iri naLynn Ruduvo (28) wepanhamba 26691 Unit B, kuChitungwiza.
Mutongi wedare iri, Oliver Mudzongachiso akamuti adzoke kudare munguva pfupi iri kutevera apo kutongwa kwenyaya yake kuchaenderera mberi.
Muchenje ari kuramba mhosva iyi uye magwaro ekubhengi uko akanzi aise mari yemendenenzi akaburitswa mudare seumboo.
Muchuchisi Edmond Ndambakuwa anoudza dare kuti nomusi waKurume 26 2017, dare rimwe chete iri rakapa Muchenje mutongo wekuti abhadhare $180 pamwedzi yekuchengeta mwana waakaita naRuduvo, asi iye anonzi haana kuita hanya nazvo.
Zvinonzi kubvira mumwedzi waChikunguru gore rapera kusvika Gunyana gore rino, chikwereti chake chemendenenzi chakwira kusvika pa$2 880.
Muchenje ari kutongwa nemutemo weSection 23(a) of the Maintenance Act Chapter 5:09 “Maintenance Defaulter”.